Zimbabwe Now Safe, Says SA – RadioVop Zimbabwe
Government spokesperson Themba Maseko said on Thursday that cabinet had approved a proposal to end the special dispensation for Zimbabwean nationals introduced in April 2009.
This followed a bilateral agreement between the South African and Zimbabwean ministers of home affairs, he told a media briefing following Cabinet’s Wednesday meeting.
The special dispensation would end on December 31, and all Zimbabweans who have not had their presence in South Africa formalised by then will be deported, Maseko said.
“Those who are here illegally without any documents will be given a period between now and the end of December to sort out their documentation with the Zimbabwean authorities and with home affairs and after this date anybody who does not have any form of permit to be in the country will be deported.”
He added: “We are saying return these (illegal) documents… Start making sure that you get your Zimbabwean documents and then when you’ve got your Zimbabwean documents, then we clarify what is your status in this country and we will then issue you with the relevant permit.
Previous PostAkon Gets Heroes WelcomeNext PostMideast Talks Resume